RW Kheyre oo baajiyey furimada kulankii Dhuusa-Mareeb, kuna wajahan Caabudwaaq.
CAABDUWAAQ(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo kusugan magaalada Dhuusa-Mareeb ayaa maanta gaaraya magaalada Caabudwaaq ee Waqooyiga gobalka Galguduud, isagoo halkaas kula kulmaya waxgaradka iyo bulshada deegaankaas oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha ku wajahan dhismaha Galmudug mideysan.
Kulamada ka dhacaya Caabudwaaq ayaa looga hadlayaa sidii ay waxgaradka iyo qeybaha bulshadu u taageeri lahaayeen dadaalada mideysan ee hadda kasocda Dhuusa-Mareeb, sidaas oo kalena waqtiga la galinayo kasokow ay bulshadu qeyb ka qaadato dadaaladaas.
Mr, Kheyre ayaa la kulmi doona Odayaasha dhaqanka iyo ciidamadii dhawaan ay la wareegtay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxayna bulshada waqooyiga Galguduud walaac ka muujiyeen sida ay wax ku socdaan ee magaalada Dhuusa-mareeb, waxayna taasi bedelkeeda horey u diideen in ay ergo dirsadaan.
Xassan Cali Kheyre ayaa baajiyey kulan looga hadlayay dibu heshiisiinta Galmudug oo lafilayey in uu maanta ka furmo magaalada Dhuusa-Mareeb, waxaana sababaha ugu waa weyn lagu sheegay in ay yihiin kuwa la xariira xagga ka qeybgalka beelaha oo aan loo dhameyn.
Xukuumadda Faderaalka ayaa dadaal badan galinaysa sidii ay u dhismi lahayd Galmudug ay dhinacyadan oo dhan isku raacsan yihiin, balse walaaca taagan ayaa ah sida ay wax uga socon doonaan qorshaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, iyadoo uu Hobyana kusoo dhamaan doono kulan ay lahayd beesha Habargidir, waxaana sidaas oo kale maqan Beesha Cadaado oo aan soo dirsan ergadii ka qeybgali lahayd kulankaas.